Izindawo ongachitha kuzo i-Halloween esabekayo | Izindaba Zokuhamba
Izindawo ongachitha kuzo i-Halloween esabekayo
Kufika okuthakazelisa iphathi le-Halloween, futhi impela ufuna ukuba nesikhathi esihle kulo nyaka. Uma ufuna ukuthi kube yi-Halloween ekhethekile, kufanele nje uye kwenye yezindawo esizokutshela zona. Izindawo zenganekwane, ezinezindaba ezethusayo noma ezigqokelwe umcimbi. Zonke zinokuthile okuthandekayo nokungaqondakali, ngakho-ke ungayeki ukusayina lezi zindawo ezikhonjiswe leli qembu.
Ku-Halloween sikhipha uhlangothi lwethu oluyimfihlakalo futhi oluyimfihlakalo, ngakho-ke sinokuningi izindawo ongazithanda. Kusukela emadolobheni abathakathi kuya ezindaweni lapho wonke umuntu egqoka khona, imicimbi yawo wonke umndeni nezinqaba zenganekwane. Kunezindawo eziningi ezingaba yisinqumo esihle kakhulu kuleli holide elinemvelaphi yobuqaba.
Lokhu ukukhetha kwethu kwezindawo ezithandekayo zokuchitha i-Halloween "ebulalayo". Ukukhetha ihhotela ungasebenzisa i umlingisi wehhotela bese ubona izinketho ezahlukahlukene ezisendaweni ngayinye.
1 ISalem, eMassachusetts, ikhaya labathakathi
2 I-Zugarramundi eNavarra, umhume wama-covens
3 Inqaba kaDracula eRomania
4 Amathuna amathuna aseParis
5 Sleepy Hollow, indawo edume eNew York
6 Umzila weJack the Ripper eLondon
7 Usuku Lwabafileyo eMexico
8 AmaSamaín e-Edinburgh
9 IHalloween yezingane eDisneyland
ISalem, eMassachusetts, ikhaya labathakathi
Uma sikhuluma ngeSalem, impela yigama ozihlanganisa ngokushesha nabathakathi. Leli dolobha elincane laseMassachusetts lidume ngokugubha i- Izilingo zeSalem ngo-1692. Kuze kwafa abantu abangamashumi amabili ngesikhathi lapho lolu hlobo lomlingo lwalusatshwa. Namuhla kuba yindawo ekhetheke ngempela yokubungaza i-Halloween. Kusuka emibonisweni kuya ekuhlolweni kwama-movie, imicimbi namaphathi aveza uhlangothi olujabulisayo lwedolobha izinsuku ezimbalwa.
I-Zugarramundi eNavarra, umhume wama-covens
Uma ungafuni ukuya kude kangaka, lapha sinedolobha lethu elithandekayo nalapho izinganekwane zithi kukhona izinto zobuthakathi. Impela ibhayisikobho ethi 'Abathakathi baseZugarramundi' izwakala ijwayelekile kuwe, ikhuthazwa izinganekwane ezikhuluma ngaleli dolobha. Kulo mhume ngokusobala bahlangana kusihlwa ukuze bafeze ama-covens abo. Ingabe uzoba nesibindi sokungena kuwo futhi ube yingxenye yalezi zingqimba zomthakathi?
Inqaba kaDracula eRomania
I-Bran Castle ithole udumo njenge okuthiwa iDracula's Castle, nokuthi incwadi kaBram Stoker ikhuluma ngenqaba efanayo. Lesi sigodlo siseRomania, futhi sasiyikhaya lobukhosi, singaxhunyaniswa neDracula. Kodwa-ke usezindleleni zokumlandela ngomkhondo eRomania. Kuyisigodlo namuhla esihlala umnyuziyamu futhi siyindawo ethokozisayo uma sithanda indaba kaDracula futhi sifuna ukusebenzisa iHalloween ekhetheke kakhulu.
Amathuna amathuna aseParis
AmaCatacombs aseParis ayisiqephu somlando wedolobha, nendawo ebabazekayo yabaningi. Kunemihubhe engaba amakhilomitha angama-300 ngaphansi kweParis lapho kunezigidi zabantu ezingcwatshwe khona. Empeleni la mangcwaba kwakungeyona nje izinkwali zokwakha izikhumbuzo, kepha ngekhulu le-XNUMX imishayabhuqe yafika, futhi nesidingo sokudlulisela abafileyo endaweni ekude kakhulu nabaphilayo, ngakho-ke kwavela umqondo wamangcwaba , noma amathuna angaphansi komhlaba. Vele kuyisimo esifanele iHalloween.
Sleepy Hollow, indawo edume eNew York
Leli yidolobhana elincane eliseWestchester County, eNew York. Yilapho kusethwe khona indaba yaseWashington Irving, 'The Legend of Sleepy Hollow'. Yebo, leyo nganekwane ye- owesabekayo ongenakhanda wehhashi. Njengoba i-Halloween iphilwa kakhulu e-United States, le micimbi ekhethekile ayinakuphuthelwa kuleli dolobha, ngemizila edlula emathuneni amahle futhi angaqondakali, imibukiso yasemgwaqweni, umculo obukhoma kanye nomuntu owesabekayo ongenamakhanda.
Umzila weJack the Ripper eLondon
Inganekwane kaJack the Ripper iqala ku- Umakhelwane waseWhitechapel waseLondon ngo-1888, lapho kufe isifebe sokuqala ezandleni zalo mbulali obulalayo. Akukaze kutholwe ukuthi ngubani uJack the Ripper, kepha bekucatshangwa ukuthi ungumuntu ofanayo, ngoba bonke abahlukunyezwayo bekungabaqwayizi abakhishwa isisu ngemuva kokubashaya. Kunemizila ekhethekile enohambo, yize ungasesha kwi-Intanethi izindawo lapho imicimbi yenzeke khona bese uqeda umzila eThe Ten Bells pub, enohlu lwezisulu futhi bekuyindawo abavame ukuhambela kuyo abaqwayizi abaningi.
Usuku Lwabafileyo eMexico
Usuku Lwabafileyo lugujwa eMexico ngoNovemba 1 no-XNUMX, okuqondana neholidi lobuKristu i-All Saints, okunguNovemba XNUMX. Le mikhosi ibiphethwe unkulunkulukazi uMictecacíhuatl, okumanje usekhona ihumushela eLas Catrinas indlela abadume ngayo emhlabeni jikelele. Kulomkhosi kukhunjulwa izihlobo ezingasekho. Yonke into igqoke izingebhezi ezinemibala, nama-catrinas nezingubo ezijwayelekile.
Ukuya e-Edinburgh ukugubha i-Halloween ukuthola imvelaphi yaleli holide, okuyingxenye ye- ICeltic Samain. Leli kube yiphathi le-Halloween elenzeka e-United States nama-emigrés ase-Ireland, futhi lapho laduma kakhulu. Ngokwesiko lamaCeltic lolu suku kwakuwusuku lwasebusika nokuphela kokuvuna, ubusuku lapho umhlaba wabaphilayo nabafileyo wawusondele kakhulu kunakuqala. Edolobheni lase-Edinburgh uhlala ikakhulukazi, nedolobha elidala elihlotshiswe ngemidwebo ye-Halloween nangemicimbi enemibala egqamile futhi ekhangayo futhi ekhombisa lokho okuhlanganisa isiko nesimanjemanje.
IHalloween yezingane eDisneyland
Izingane ngokungangabazeki yilabo abangajabulela lezi zinsuku kakhulu ngomdlalo we 'Trick or treat', ngakho-ke kukhona nezindawo ozohamba nazo. Kubantu abaningi amapaki wokuzijabulisa Imicimbi ekhethekile ibanjelwa i-Halloween, efana neDisneyland, lapho yonke into igqokwe khona namathanga nezimpawu ezethusayo, kepha ezinganeni, kukhona imvunulo, imidlalo kanye nomculo onabalingiswa abanjengoMaleficent, obalindele eCourt Courtyard ukuyozijabulisa nomndeni leli qembu.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba Zokuhamba » General » Izindawo ongachitha kuzo i-Halloween esabekayo
Lawa ngamahhotela kaCristiano Ronaldo ePortugal
Izizathu ezi-6 zokuhamba nezingane